Sivavanye ngokucokisekileyo iXiaomi Mi Band 1s | I-Androidsis
Sivavanye ngokucokisekileyo iXiaomi Mi Band 1s
Kolu hlaziyo lutsha lwezixhobo ze-Android, okanye kule meko iGajethi iyahambelana nenkqubo yokusebenza ye-Android, Sivavanye ngokupheleleyo iXiaomi Mi Band 1s ukukucacisela, ngokwamava am obuqu, yonke into le isongo sobuchwephesha esitsha esiza nayo eyakhelwe-ngaphakathi inzwa yokubetha kwentliziyo, ukumelana namanzi nothuli kunye nebhetri ehlala ngaphandle kwengxaki ngaphezulu kwenyanga kwi-Standby, kwaye sinokufumana nje i-29,99 yeedola zase-US, okanye yintoni eza ngokufanayo notshintsho lwangoku, ngaphezulu kwama-28 eeyuro.
Eyona nto intsha inomdla oku kubandakanya entsha Xiaomi Mi Band 1s Xa kuthelekiswa nemodeli yangaphambili, ngokuqinisekileyo yeyayo Imvakalelo yokubona kwentliziyo yesantya, Isivamvo esiya kuthi kwimizuzwana engama-30 sithathe ukubetha ngomzuzu wentliziyo yethu kwaye siyokugcina kwimbali epheleleyo kwisicelo se-Android esinayo le bracelet kwaye kufuneka siyikhuphele kwiVenkile yokuDlala ngokwayo kuGoogle ukuvumelanisa kunye nokudityaniswa okufanayo.
1 Ukucaciswa kobuchwephesha beXiaomi Mi Band 1s
2 Yonke imisebenzi yeXiaomi Mi Band 1s
3 Uluvo lwam
Ukucaciswa kobuchwephesha beXiaomi Mi Band 1s
Umzekelo Iqela lam loku-1
Izinto zokwakha IAluminiyam-yemagniziyam ingxubevange yentloko kunye ne-antiallergic silicone yezacholo eziguqukayo
Conectividad I-Bluetooth 4.0 iyasebenza kwi-Android 4.4 nangaphezulu kunye ne-iOS 7.0 nangaphezulu
Ezinye izinto I-IP67 eqinisekisiweyo yothuli kunye nokuthintela amanzi kunye nomxhuzulane
Ubunzima bentloko 5 iigram
Misela ubunzima I-14 gram
Ibhetri I-45 mAh yee-lithium polymers ezisinika inyanga kwi-Standby
Ixabiso 29.99 $ - malunga ne-28 euro ngeranti yangoku.
Yonke imisebenzi yeXiaomi Mi Band 1s
Ngaphandle kwamandla thatha ukubetha kwentliziyo kwimizuzwana nje engama-30 Ukusuka entliziyweni yethu kwaye sigcine iziphumo ngokuzenzekelayo sibulela kwisicelo seXiaomi Mi Fit, le bracelet yobungakanani, isinika izinto ezinomdla njengale ndizakuzibhala apha ngezantsi:
Thatha ukubetha kwentliziyo yethu kwaye uyigcine kwimbali efini enkosi kwiakhawunti yethu yeXiaomi, iakhawunti ebalulekileyo ukuze ukwazi ukubhangqa kwaye uqale ukonwabela iXiaomi Mi Band 1s.
Pedometer okanye inyathelo lokubala kunye nokukwazi ukumakisha injongo yemihla ngemihla ukongeza kwidatha egcinwe kwimbali yeakhawunti yethu yeXiaomi.
Imitha yokulala kunye nomgangatho wayo. Idatha igcinwe kwimbali yethu efini.
Iialamu ezi-Smart okuvusa ngexesha elifanelekileyo ukuze ukuvuka kubeyothusa kangangoko kunokwenzeka.
Isaziso ngokukhanya okumhlophe okuthathu kunye nokungcangcazela kwe-LED kwezicelo zethu ezikhethiweyo ngaphambili kwisicelo seMi Fit.
Isaziso nge-LEDS kunye nokushukuma kweefowuni ezingenayo.
Uluvo lwam malunga nale nto ithengiswayo okanye into eyenziwayo yomzimba ayinakuba ntle., kunye nokususa ukusebenza kwe-sensor yayo yokubetha kwentliziyo, eyona nto ingcono endinokuyifumana kule Xiaomi Mi Band 1s, imitha yayo yokulala esemgangathweni kunye nealam zayo ezikrelekrele ziphele zindonwabisa kangangokuba ndalala. busuku ngabunye ngesacholo ukuze ndibone iziphumo ngentsasa elandelayo kwaye ndizigcine kakuhle kwimbali yam efini.
Ngamafutshane isixhobo esineemvakalelo zesilinganisi esineenkcukacha eziphezulu kakhulu Ngexabiso elibonakala kum ngaphakathi kufikelela phantse kuzo zonke ezoqoqosho kangangokuba inokuba yenye yezona zixhobo zithengisa kakhulu zeli xesha, nangakumbi ukuba sicinga ukuba iiholide zeKrisimesi sele zikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Sivavanye ngokucokisekileyo iXiaomi Mi Band 1s
Izimvo ezi-33, shiya ezakho
Kungcono ukubeka i-MI BAND PULSE, eligama elisemthethweni, akunjalo?
Igama elisemthethweni yiXiaomi Mi Band 1s.
UJuan A. Pérez García sitsho
Ndiyakuxelela, ngaphambi kokuthandabuza ukuba ufumene lo mbandela ... "intamo" ichanekile, kukusebenzisa ibhendi ye-1S enezinto ezihonjisiweyo, endaweni yesongo, cela ukuba ubonise, kuba iyakuthatha imilinganiselo eyahlukileyo ...
Phendula kuJuan A. Pérez García
Enkosi mhlobo ngenqaku lakho.
Ngaba ukhe wakukhangela ukuthembeka kwemitha yokubetha kwentliziyo ngokuthelekisa umtya wesifuba njengePolar okanye into enjalo?
Ezi mitha zokukhanya zinesidima sokungaguquguquki kunye nokungachaneki kwimilinganiselo yazo ngakumbi xa usenza umthambo kwaye kukho umahluko omkhulu.
Yeyona mitha ithembekileyo kuba ndiyithelekise ngokuthe ngqo kunye neTensiometer yezo zithatha ukubetha kwentliziyo yakho kwivalve yomoya edumbayo engalweni kwaye akukho mahluko phakathi kwezi zibini, umahluko kakhulu.
IPolar ondixelela yona iyasebenza ngakumbi kwiimbaleki kodwa ikwabiza kakhulu kunale 28 Euro.
Umhlobo Wenene FM (@mncedisi) sitsho
Olunjani lona uhlalutyo olubuhlungu. Umgangatho uyafana nowangaphambili? Ekugqibeleni ngaba isicelo siSpeyin?
Phendula kwi-Fco Javier Ferruses (@ferruses)
Fco Javier, ukuba ubuyibonile ividiyo ubuya kuqonda ukuba usetyenziso endilusebenzisayo, olusekwe kwinto yoqobo kunye nakwi-HTC mania, liguqulelwe ngokupheleleyo kwiSpanish.
Molo ekuseni uFrancisco. Izolo ndifumene isongo sam kwaye bendizama ukufaka usetyenziso njengoko wenze, ngemowudi yokusebenza njl njl.
Ungandinceda? Ingayinto entle.
ungazithenga phi ezi-1? kuba andifumani ndawo apho bayithengisa khona, yonke into iyathengiswa kwangaphambili
Uyithenge phi okanye bayithengisa phi? Ngaba ixabise i-25 Euro? iphi?
Ngaba ilinganisa ukubetha kwentliziyo ngokuzenzekelayo okanye ngaba kufuneka uyicele?
Ukuba uyayibonisa kwividiyo khange ndikwazi ukuyibona okwangoku, kwaye ndiyaxolisa.
Kuya kufuneka umcele ukuba ayenze kwi-mobile app, ekuphela komsebenzi osebenzisa amaza ngokuzenzekelayo kwimitha yokulala.
Mholo. Namhlanje umthengisi undiphendule. Ithi ukubetha kwentliziyo yakho kukulinganisa kuphela ngokuqhubekayo ukusuka kwi-22: 00 pm ukuya kwiyure e-1 emva kokuba uvukile. Ndidinga ukuphendula ukuba le milinganiselo, ayenzayo rhoqo kwimizuzu emi-2, iyabonakala kwisicelo, njengakwiFitbit Charge HR. Into endingayiqondiyo kukuba kutheni ingalinganiswa ngokungaguquguqukiyo emini njengoko ibhetri isenokuhlala ixesha elide okanye elide kuneCharge HR. Ndicinga ukuba olu phuculo luza kuza ngohlaziyo lwe-firmware. Ukuchaneka kwemilinganiselo xa kuthelekiswa neApple Watch kuchanekile, kodwa hayi kwimithambo efuna. Ukuba abayifaki imilinganiselo eqhubekayo yeeyure ezingama-24, ndicinga ukuba iya kuba yindawo ebuthathaka kakhulu ukutsala abathengi. Isandla sesibini unokufumana i-Charge HR malunga ne-80 euro kwaye uqinisekise lo msebenzi. Ngoku ndicinga ukuba inyathelo elilandelayo liza kuba liMi Band enesikrini esincinci se-monochrome esingabenzakalisi kakhulu ubomi bebhetri. Ndiqinisekile ukuba iya kukhutshwa kwiinyanga ezimbalwa ... kukuzivelela okunengqiqo.
Naliphi na ikhonkco lokuyithenga?
Entanyeni inokubekwa kwakhona kuba kukho amatyathanga entamo.
Molo, ngaba kunyanzelekile ukuba idityaniswe ngebluetooth ngokusisigxina ukunika ukubetha kwentliziyo?
Ngaba ungasishiya ikhonkco lokukhuphela usetyenziso ngesiSpanish ngomsebenzi wokulinganisa ukubetha?
Kwividiyo uthi uyikhuphele kwi-htcmania kodwa andiyifumani.
Ngaba inayo iGPS ebalekayo? Ndithetha ukubala ixesha kumathambeka nabanye….
AyinaGPS, isebenzisa ipedometer ukulinganisa umgama. Kancinci inemitha yokubetha kwentliziyo ithathela ingqalelo ukuba sisacholo esinokuthengwa ngexabiso elimalunga ne-30 euros. 😉
ICesc Freixas sitsho
Ngaba ungashiya ikhonkco lesicelo?
Phendula Cesc Freixas
Mholo. Ngaba iwebhusayithi oyicebisayo ukuba uthenge isongo, iGeekbuying, ngaba inokuthenjwa? Ndifumene isongo nakwiAmazon kodwa ixabisa i- € 50 kwaye andiwuqondi umahluko wamaxabiso. Imibulelo emininzi. Ukubulisa.
Ndisebenzisa isicelo seXiaomi Mi Fit kodwa andikwazi ukuyifumana ukurekhoda ukubetha kwentliziyo yam.Ndiyayicela ngesicelo ... andazi ukuba izakuba kuba ndiyiphatha kwi-Samsung S3 ene-Android 4.3 ... nangona ezinye ziluncedo.
Mholweni… ami into efanayo… ingaba ukwazile ukuyisombulula?… ..For km utsho njani ??… enkosi… imibuliso
Kwenzeka into efanayo nakum, ndikhuphele izicelo ezininzi ezahlukeneyo kwaye khange ndikwazi ukufumana nayiphi na kuzo ukubhalisa ukubetha kwentliziyo yam, kwimbono yam ndicinga ukuba inezinto ezininzi kakhulu ngexabiso elinazo ...
Kufuneka ukhuphele i-Mi Fit App esemthethweni kwiVenkile yeGoogle Play.
UYOHANE Carlos GB sitsho
Molo, ndinengxaki, ndiyitshintshile iselfowuni yam kwaye ngoku ngeXiaomi Mi4c isongo asihambelani nam (kuya kufuneka ubhekise kuhlobo olunye). Kuyavela ukuba nge-BQ aquaris E4 ibingqinelana nam, kodwa bendinengxaki yokuba iqhosha lokubeka esweni ukubetha kwentliziyo lingabonakali njengoko bekukho ikhusi le-4,5. Ke, naziphi na iingcebiso ???
Phendula JUAN Carlos GB
I-Xk ayilinganisi ukubetha kwentliziyo kwaye yonke enye into ilungile
Ndineveki nayo, isebenza kakuhle kodwa iapp yevenkile ye-iPhone ayizi nemitha yokubetha kwentliziyo, umntu uyayazi indlela yokuyifumana nge-android ukuba kukho indlela kodwa ye-iOS andazi ukuba ndingayinceda njani! !!
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1129483 (kuloo forum kukho ulwazi kunye nendlela yokusebenzisa inzwa yentliziyo ngendlela engcono)
Ndiyithengile kwaye ndiyasebenza. Nangona kuyinyani ukuba sisongo se-30 se-euro kwaye ukuba siyithelekisa neFitbit okanye iGarmin HR, iyaphulukana, ngenxa yelo xabiso lelona lifanelekileyo onokuba nalo kwizinto ezinxitywayo zolu hlobo.
iimpahla ezinxitywayo sitsho
Ewe kubonakala ngathi iXiaomi ngoku iza kukhupha ingxelo entsha yale bracelet, iXiaomi Mi Band 2, ngolunye uphuculo kunye nescreen se-LCD. Kwimeko apho ezi nguqulelo bezingakulungelanga ukuhlawula amaxabiso ...
Phendula kwimpahla evelayo
I-Snapchat kunye nokukhangela kwayo iifomula ezintsha ezinje ngeyokugqibela: "Umhloli wamabali"
I-Bender, Fry kunye neLeela zikulindile kwiFuturama: Umdlalo weDrones